ရေသတိပေးချက်သောက်ရ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ကျန်းမာရေး & Fitness Apps ကပ » နေ့စဉ်ရေစားသုံးမှု & နှိုးစက် - ရေသတိပေးချက်မသောက်ရ
နေ့စဉ်ရေစားသုံးမှု & နှိုးစက် APK ကို - ရေသတိပေးချက်မသောက်ရ
ရေသတိပေးချက် - အချိန်မီရေကိုသောက်ရန်သင့်အားသတိပေး! ယလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ယောဂအပြီးရေတိုထောက်ပံ့ရေးအတွက်ခန္ဓာကိုယ် Save, ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြှင့်တင်ရန်, စိတ်ဖိစီးမှုလွှတ်ပေးရန်နှင့်အလုပ်အပြီးပင်ပန်းနွမ်းနယ်ဖယ်ရှားပစ်ရ ... သင်ရေနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တစ်ဦးသောက်စရာရေသတိပေးချက်ရှိသည်အဖြစ် hydrated နေဖို့နိုင်! -Want ကျန်းမာတက်ကြွဖြစ်သလော
အစိုဓာတ်ကိုအပြည့်အဝနဲ့ဘဝကိုအတူစိမ်းဖြင့် -Want ငယ်ရွယ်အသားအရေ? ရေ၏မဟာတနျခိုးပုံမှန်နေ့စဉ်ရေစားသုံးမှုနှင့်တကွကြွလာ။ ရေသတိပေးချက် Get, ရေကိုမသောက်နှင့်သင်တို့၏ရေစားသုံးမှုမှတ်တမ်းတင်ရန်စတင်!
ရေသတိပေးချက်သည်သင်၏သစ္စာစောင့်သောသောက်သုံးရေ PAL ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်အတွက်ရေသောက်ရေသတိပေးချက်နိုးစက်ကိုသင်သောက်ပါ။ နေ့စဉ်ရေစားသုံးမှုအင်္ဂါရပ်များ Records ကိုသင့်ရဲ့သောက်သုံးရေ status ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ သငျသညျရေစားသုံးမှုမှတ်တမ်းများပြန်ရေးနိုင်ပါတယ်။ တဖန်သင်တို့ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်အဘို့သင့်အရက်သောက်ခွက်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ဘူး။
ရေသတိပေးချက် - သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရေ tracker ။
ရေသတိပေးချက်မသောက်ရ - သင်၏သီးသန့်သောက်ရေနှိုးစက်နာရီနှင့်သင့်ချိုမြိန်ရေအားလျှပ်စစ်နည်းပြ ပို. ရေကိုသောက်ရန်သင့်အားစောင့်ကြည့်။ သင့်ရဲ့အသားအရေဘဝနှင့်အတူပြင်းစွာတိုက် Make နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆက်ကြိုးစားပါ!
နေ့စဉ်ရေစားသုံးမှု - သင်၏ရေဘတ္။ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ရေစားသုံးမှု Customize နှင့်မည်သို့မကြာခဏနှင့်မည်မျှရေသင်သောက်ရမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရေနှိုးဆော်သံကိုထိန်းညှိ။
နေ့စဉ်ပစ်မှတ် - ကျန်းမာသောက်သုံးရေချိန်ခွင်လျှာထားပါ။ သင်သည်သင်၏နေ့စဉ်ရေသောက်အလေ့အထများခြေရာခံတစ်ဦးသင့်လျော်သောရေအစားအသောက်များတွင်တည်ဆောက်ကူညီပါ။
စိတ်တိုင်းကျရေဖလား - ရေကိုသောက်သောခွက်ကို၏အရွယ်အစားပြောင်းပါ။
-Don't စိုးရိမ်ပူပန်။ ရေသောက်သတိပေးချက်သင့်ရဲ့သောက်သုံးရေအလေ့အထတစ်ခုစံချိန်ကိုစောင့်ရှောက်နှင့်အချိန်ပိုမိုရေကိုသောက်ရန်သင့်အားသတိပေးပါလိမ့်မယ်။
-ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ။ ခွက် Get နှင့်ရေသတိပေးချက်နှင့်အတူယနေ့သင်၏အရေစားသုံးမှုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကြိုးစားပါ။
ရေသတိပေးချက်, သင့်အနားမှာကဒီမှာအမြဲဖြစ်ပါသည်သင်လိုအပ်ဘယ်လောက်ရေတွက်ချက်နှင့်အချိန်အပေါ်ရေကိုသောက်ရန်သင့်အားသတိပေးနေပါတယ်။ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ရေစားသုံးမှုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ယခုရေသောက်သတိပေးချက်တွေနဲ့ရေတွင်းတစ်တွင်းရေချိန်ခွင်လျှာကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားပါ။
ok, သင့်ခန္ဓာကိုယ်စိုနဲ့ရေ၏တန်ခိုးလွှတ်ပေးရန်မြင့်မားတဲ့အချိန်။ သင်၏ကျန်းမာရေးကတန်ဖိုးရှိပါ!
- နယူးအင်္ဂါရပ်နောက်ခံ။ Come နှင့်သင့်သောက်စရာရေသမိုင်းနှင့်အစီရင်ခံစာစစ်ဆေး!
- တည်ငြိမ်တိုးတက်မှုများနှင့် bug ပြင်ဆင်ခြင်းများ။
နေ့စဉ်ရေစားသုံးမှု & နှိုးစက် - ရေသတိပေးချက်မသောက်ရ
3.55 ကို MB
Power က Tools များ Apps ကပ
Rembo - သတိပေးချက် ...